Umzi mveliso wezisombululo zamazinyo | I-China Isisombululo samazinyo abavelisi kunye nabaxhasi
Design Uyilo lomqamelo oluhlengahlengisiweyo luhambelana nokuhlala kwe-ergonomic kunye nokuma kokulala, okulungele unyango lwexesha elide.
■ Isihlalo somqamelo senziwe ngendlela yokwahlulahlula, kwaye ukuphumla kweenyawo kwenziwa yi-PU eqinile egwebu, enganyangekiyo kwaye ingekho lula ukuyonakalisa. Esona sihlalo siphantsi yi-380mm, esilungele ukuba izigulana zinyuke zisihla.
■ Umgangatho ophakamileyo wesikhumba esithambileyo kunye nenkxaso ye-lumbar kunye noyilo lokugcina intloko luneemvakalelo ezinamandla zokwaleka.
Chair Uyilo olumi njengesihlalo sepesika lwandisa isithuba semilenze yoogqirha kwaye luqinisekisa ukufikelela okusondeleyo phakathi koogqirha nezigulana.
IYunithi ye-XH605 yamazinyo
Iyunithi yokufakwa kwamazinyo sisixhobo sonyango lwamazinyo esenzelwe ngokukodwa utyando lokufakwa kwamazinyo. Iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa zokukhanyisa ngotyando lwamazinyo, ukutsala njalo njalo.
IYunithi ye-XH502 yamazinyo
ICandelo likaGrace-D XH502 laMazinyo liphuhliswa ngokusekwe kumxholo othi "Nandipha unyango" ngu-SHINVA. Ulawulo lwe-microcomputer oluzenzekelayo kunye ne-LCD eguqukayo yokubonisa ixesha langempela yenza ukuba umsebenzi kagqirha ube lula ngakumbi kwaye ubukrelekrele. Uyilo lwe-ergonomic lwenza ukuba isigulana siphumle kwaye sinciphise uxinzelelo kunye nentlungu kunyango. Ukusebenza kwayo ngokugqibeleleyo kunceda abaguli ukuba balonwabele unyango.
XH501 Icandelo Lamazinyo
ICandelo likaGrace-D XH501 laMazinyo liphuhliswa ngokusekwe kumxholo "wonyango oluhle" ngu-SHINVA. Uyilo uthathela ingqalelo ukonwaba kunye nokundwendwela kwesigulana kunye nokusebenza kogqirha. Ukhetho lwezinto ezibonakalayo, uyilo lwe-ergonomic, ulawulo lwe-microcomputer oluzenzekelayo kunye nenkqubo yokuvelisa ukungunda kuyenza isebenze ngokuthembekileyo, ukusebenza ngokukuko kunye nembonakalo entle.
Smart oluzenzekelayo iqhoshana-kweentsholongwane
I-Smart Series iwher-disinfector isetyenziselwa ukuhlamba, ukubulala iintsholongwane kunye nokomisa isixhobo (kubandakanya izixhobo zamazinyo), izinto zeglasi kunye nezinto zeplastiki kwisibhedlele i-CSSD okanye kwigumbi lokusebenza.
Ukuhlamba kunye nokubulala iintsholongwane kuyahambelana nomgangatho we-EN ISO 15883 wamazwe aphesheya.
ESONA Sterilizer siphezulu se-Steam: I-T18 / 24/45/80 yinkqubo yokubulala iintsholongwane yeCandelo B. Njengoluhlobo lwesithinteli soxinzelelo oluphezulu, luthatha umphunga njengolwelo lokucoca ukhuseleko olukhuselekileyo olukhawulezayo kunye noqoqosho.Isiqhelo zisetyenziswa kwisebe lamazinyo, isebe lamehlo, igumbi lokusebenza kunye ne-CSSD ukwenza inzalo ngesixhobo esijijelweyo okanye esingavalwanga, ilaphu, izitya , inkcubeko, ulwelo olungatywinwanga njl.
ESININZI Sterilizer yeSteam
ESONA Sterilizer SIPhezulu: I-T60 / 80 njengoluhlobo lwesithambisi soxinzelelo oluphezulu, ithatha umphunga njengesixhobo sokucoca ukhuseleko olukhawulezileyo kunye noqoqosho, ukusebenza okunyanzelekileyo. Inkqubo esebenza kakuhle yokumpompa kabini kunye namandla amakhulu okugcina amandla evaporator akhawuleza kunesicoci sesixokelelwano esiqhelekileyo sesitshizi sokumpompa isantya kunye nokuvelisa umphunga. Ziqhelekile ukuba zisetyenziswe kwisebe le-stomatological, isebe le-ophthalmological, igumbi lokusebenza kunye ne-CSSD ukwenza inzalo kwilaphu elitshixwayo okanye elingavalwanga, izinto, indawo yenkcubeko, ulwelo olungatywinwanga njl.
I-Dmax-N Cassette Sterilizer yedijithali
I-Digital Cassette Sterilizer sisixhobo esizenzekelayo esizenzekelayo esisebenzisa inzalo esisebenzisa uxinzelelo njengomphunga. Ifanelekile inzalo kwizixhobo zonyango ezinokumelana noxinzelelo lomphunga, ezinje ngezixhobo zamazinyo, izixhobo ezichanekileyo zamehlo, i-endoscope yamazinyo eqinile kunye nesixhobo sokuhlinzwa, njl.